43 Zvino nzara yakanga iri huru panyika yacho.+ 2 Pavakangopedza kudya zviyo zvavakanga vauya nazvo kubva kuIjipiti,+ baba vavo vakati kwavari: “Dzokerai, mutitengere zvokudya zvishomanana.”+ 3 Judha akabva ati kwavari:+ “Murume wacho akatinyevera kwazvo zviri pachena, achiti, ‘Musaonazve chiso changu kunze kwokuti muine munun’una wenyu.’+ 4 Kana muchizorega munun’una wedu achienda nesu,+ tinoda kuenda tinokutengerai zvokudya. 5 Asi kana musiri kumutuma, hatisi kuzoenda, nokuti murume wacho akati kwatiri, ‘Musaonazve chiso changu kunze kwokuti muine munun’una wenyu.’”+ 6 Israeri akati:+ “Nei maifanira kundikuvadza nokuudza murume wacho kuti mune mumwe munun’una?” 7 Ivo vakati: “Murume wacho akabvunza zvakananga pamusoro pedu nehama dzedu, achiti, “Baba venyu vachiri vapenyu here?+ Mune mumwe munun’una here?’ uye takamuudza maererano nechokwadi ichi.+ Taigoziva sei kuti aizoti, ‘Uyai nomunun’una wenyu’?”+ 8 Judha akazoti kuna baba vake Israeri: “Tumai mukomana aineni,+ kuti tisimuke tiende, kuti tirambe tiri vapenyu tirege kufa,+ isu nemi nevana vedu vaduku.+ 9 Ndichava chokumbofanobata nokuda kwake.+ Mungareva chirango nokuda kwake muruoko rwangu.+ Kana ndikatadza kumuunza kwamuri ndomuisa kwamuri, ipapo ndichave ndakutadzirai kwenguva yose. 10 Asi kudai tisina kuverengera, iko zvino tingadai takasvikako uye takadzoka kaviri aka.”+ 11 Naizvozvo baba vavo Israeri vakati kwavari: “Saka, kana zvakadaro,+ itai izvi: Isai zvibereko zvakanaka kwazvo zvenyika mumidziyo yenyu muende nazvo kumurume wacho kuti chive chipo:+ bharisamu shomanana,+ uchi hushomanana,+ rabhudhanamu nemakwati anobuda zvinonama,+ shomhwe dzomupistakiyo nemaarumondi.+ 12 Uyewo, torai mari yakapetwa kaviri mumaoko enyu; uye mari yakadzoswa iri mumuromo wehomwe dzenyu muchadzokera nayo iri mumaoko enyu.+ Zvimwe kwaiva kukanganisa.+ 13 Torai munun’una wenyu musimuke, mudzokere kumurume wacho. 14 Mwari Wemasimbaose ngaaite kuti munzwirwe tsitsi nomurume wacho,+ kuti akusunungurirei mumwe mwana wababa venyu naBhenjamini. Asi ini, kana ndikashayikirwa, ndashayikirwa hangu!”+ 15 Naizvozvo varume vacho vakatora chipo ichi, vakatora mari yakapetwa kaviri iri muruoko rwavo naBhenjamini. Vakabva vasimuka, vakaenda kuIjipiti, vakamira pamberi paJosefa.+ 16 Josefa paakaona Bhenjamini ainavo, akabva ati kumunhu aitarisira imba yake: “Enda nevarume ava kumba, uuraye mhuka uye ugadzirire,+ nokuti varume vacho vachadya neni masikati.” 17 Murume wacho akabva angoita sezvakanga zvataurwa naJosefa.+ Naizvozvo murume wacho akaenda nevarume vacho kumba kwaJosefa. 18 Asi varume vacho vakatya nokuti vakanga vaendeswa kumba kwaJosefa,+ uye vakati: “Tiri kuunzwa kuno nemhosva yemari yatakadzokera nayo iri muhomwe dzedu pakutanga kuti vatidenhe, vatirwise uye kuti vatiite varanda, isu nembongoro dzedu!”+ 19 Nokudaro vakaswedera kumurume aitarisira imba yaJosefa, vakataura naye vari pasuo remba, 20 vakati: “Pamusoroi, ishe wangu! Chokwadi takauya kuzotenga zvokudya pakutanga.+ 21 Asi patakasvika panzvimbo yokurara+ tikavhura homwe dzedu, takaona mari yomumwe nomumwe iri mumuromo wehomwe yake, mari yedu sokuyerwa kwayakanga yaitwa. Naizvozvo tingada kuidzosa isu pachedu.+ 22 Tauya neimwe mari kuti titenge zvokudya. Chokwadi hatizivi kuti ndiani akaisa mari yedu muhomwe dzedu.”+ 23 Iye akabva ati: “Farai henyu. Musatya.+ Mwari wenyu naMwari wababa venyu akakupai pfuma muhomwe dzenyu.+ Mari yenyu yakatanga yauya kwandiri.” Pashure paizvozvo akavabudisira Simiyoni.+ 24 Murume wacho akabva apinza varume vacho mumba maJosefa, akavapa mvura kuti vageze tsoka dzavo,+ akapa mbongoro dzavo zvokudya.+ 25 Vakagadzirira chipo+ nokuda kwokuuya kwaJosefa masikati, nokuti vakanga vanzwa kuti vakanga vachizodya zvokudya imomo.+ 26 Josefa paakapinda mumba, vakabva vauya nechipo chaiva muruoko rwavo kwaari mumba, vakamugwadamira.+ 27 Akazobvunza kana vaifara akati:+ “Baba venyu, murume akwegura wamakataura nezvake, vanofara here? Vachiri vapenyu here?”+ 28 Ivo vakati: “Mushandi wenyu baba vedu vanofara havo. Vachiri vapenyu.” Vakabva vakotama, vakagwadama.+ 29 Paakatarira, akaona Bhenjamini munun’una wake, mwanakomana waamai vake,+ akati: “Uyu ndiye munun’una wenyu wegotwe, wamakandiudza nezvake here?”+ Akawedzera kuti: “Mwari ngaakunzwire nyasha,+ mwanakomana wangu.” 30 Zvino Josefa akanga ava kukurumidza, nokuti akarwadziwa mumwoyo nokuda kwomunun’una wake,+ zvokuti akatsvaka nzvimbo yokuchemera uye akapinda muimba yomukati, akasvimha misodzi ari imomo.+ 31 Akazogeza chiso chake, akabuda, akazvidzora, akati:+ “Isai zvokudya.”+ 32 Vakamuisira ari oga, ivo voga, vaIjipiti vaaidya navo vari voga; nokuti vaIjipiti vaisakwanisa kudya zvokudya nevaHebheru, nokuti izvozvo chinhu chinosemesa kuvaIjipiti.+ 33 Zvino vakanga vakagara pamberi pake, dangwe maererano noudangwe hwaro+ uye gotwe maererano nougotwe hwaro; uye varume vacho vakaramba vachitarirana vachishamisika. 34 Akaramba achiita kuti migove ibve pamberi pake ichienda kwavari, asi aiwedzera mugove waBhenjamini nekashanu pane ukuru hwemigove yevamwe vose.+ Naizvozvo vakaramba vachiita mabiko uye vachinwa naye kwazvo.+